Atody nahandro malefaka tonga lafatra tsotra | ThermoRecipes
Hanombohana10 minitraOlona 465 kaloria
Kilasika amin'ny sakafo maraina kaontinanta! Atody nandrahoina. Na dia milaza aminao ny marina aza aho, ity lovia ity dia mampatsiahy ny fahazazako, ny fotoana nanomanan'ny reniko ho ahy mba hahafahanay milentika savony mofo hisakafoanana. Amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa, ny atody malefaka dia mahafinaritra, tena mahasalama ary matsiro amin'ny tsiro. Ankoatra izany, fomba hafa sy mahasarika ny ankizy kely ny fialam-boly amin'ny fihinanana azy miaraka amin'ny sotro sy ny mofo atsoboka. Ho ahy, miaraka amina sira sy dipoavatra, ary mofo voatoto ho atsoboka… izany no tiako indrindra.
Ary satria ny anarany dia manondro ny "mandeha mamaky rano" dia midika fa mila fahandroana kely izy satria tadiavintsika io teboka tena izy io izay masaka kely ny fotsy ivelany, somary viscous ao anatiny ary ranoka ny konona ... izay mahatonga antsika manana atody mamy sy be ranony tanteraka. Ary noho izany, ny thermomix dia hanampy antsika mahandro azy mandritra ny minitra marina mba ho marina fotsiny.
Ah! Ary aza adino ny mamaky ity fomba fahandro ity ny fomba fahandro atody amin'ny thermomix mba hifanaraka tsara amin'ny toerana tianao indrindra!
1 Atody nahandro
Kilasika amin'ny sakafo maraina kaontinanta! Atody nandrahoina.
Fotoana hiketrehana: 10M
Fotoana manontolo: 10M
Atody 4 salasalana vao nosasana
sira, dipoavatra ary toast ho atsoboka (tsy voatery)
Napetrakay tao anaty vera ny rano, napetrakay tao anaty harona ireo atody tena madio. Manidy ny vera sy ny programa izahay 10 minitra, maripana varoma, hafainganana 1.
Esorinay ao anaty fitoeran-drano misy rano mangatsiaka izy ireo mba hampangatsiaka haingana ary avelao 1 minitra. Maina tsara isika, ary mametraka azy tsirairay ao anaty fitoeran-javatra na solomaso tery mba tsy hihetsika.
Ny sombin-kazo ambony ihany no esorinay tsara ary asiana sira, dipoavatra ary mofo atsobika kely mba hankafizinay! Mifanampia amin'ny sotro kely sady manongotra azy no mihinana azy dia tena manampy tokoa!
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Tsotra, atody, Latsaky ny 15 minitra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Resipeo thermomix » atody » Atody nahandro